Iwe unoti sei ndinokuda muchiGerman? Unoti sei ndinokuda muchiGerman? Vadiwa shamwari, mune ino chinyorwa, isu tichataura nezve mazwi erudo muchiGerman. Muzvinyorwa zvedu zvakapfuura, takakunyorerai mameseji erudo nerudo muchiGerman, kana muchida, munogona kuwana izvo zvinoenderana nekutsvaga kwedu webhusaiti uye maforamu eGerman.
kutaura sei ndinokuda muchiGerman Ndinokuda inoratidzwa se. Ndinokuda iti ndinokuda Means.
Bu ich liebe dich mumutsara ini izwi "mwanakomana" Zvinoreva, love Kana izwi iri lieben iko kubvumirana kweshoko mune wekutanga munhu mumwechete, dich izwi rinoti "iwe kwauri”Zvinoreva. Naizvozvo ich liebe dich mutongo kuTurkey ndinokuda inoshandurwa se
Iwe unogona zvakare kushandisa anotevera kutaura kuratidza kwako rudo uye rudo kune mumwe munhu:
Ich bin mune dich ferliebt
Ndiri murudo newe.
Ich vermisse dich saka sehr
Ich ichaita mit dir leben
Ndinoda kugara newe
Ndiri kufara zvikuru nemi.
ICH LIEBE ACHANGE ACHAITA KUTI ACHANGE ACHINYANYA
Ndinokuda uye ini handidi kurasikirwa
DU BIST MEIN MEGENLANG MU MEINEM HERZ
Muri mumoyo mangu chero ini ndichirarama
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi miviri yapfuura, muna Gumiguru 2, 13, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa muna Zvita 2021, 4.
Ndeupi mwedzi ari Juni
Football yeGermany Terms
Mashoko echiGerman anotanga nebhii D
Mashoko echiGerman anotanga nemavara J
Mwedzi upi April
Mashoko echiGerman anotanga nemavara G